Wonke umntu (umva ka-Backstreet) ngoo-Backstreet Boys - Izinto Zobugcisa
Wonke umntu (umva ka-Backstreet) ngoo-Backstreet Boys
Ebhalwa ngabahlaseli beSweden uMax Martin kunye noDenniz Pop, le ngoma yomdaniso kunye ne-Backstreet Boys evakalisa ukubuya kwabo ngokuphumelela kwaye bayalela wonke umntu ukuba agungqise imizimba yabo ekubhiyozeni. Kodwa ibuya phi kanye le nkwenkwe inkwenkwe ukusuka ?
abafana besemva kwisitalato (isihloko Umva we-Backstreet Ukukhutshwa kwamazwe aphesheya) yayiyi-albhamu yokuqala yokuqala yaseFlorida e-US, apho abaphulaphuli bebengayazi impumelelo yokuqala yeqela eYurophu kunye nelizwe labo elaziwa ngokuba lidumileyo. Ukungaziwa kwabo eMelika yayiyeyona nto ibangele ukuba umongameli weJive Records u-Barry Weiss angafuni ukuyikhulula ingoma njengeyodwa kwaye ekuqaleni wayigcina ikwi-albhamu yase-US ngokupheleleyo. Ibhendi yaphikisana ngelithi isihloko singabhekisa ekubuyeni kwabo eMelika, kodwa u-Weiss akazange ashukume de ingoma-eyayingowokuqala ekukhululweni kwamanye amazwe-yaqala ukufumana umphunga kwirediyo yaseCanada nakwizikhululo zase-US ezikufutshane. Wongeze le ngoma kwi-albhamu yase-US emva kokuba iiyunithi zesigidi sele zivelisiwe. Yakhishwa njengowesine engatshatanga.
Xa umlawuli uJoseph Kahn wayecelwa ukuba enze ividiyo yomculo, waxelelwa ukuba i-Backstreet Boys yayifana ne-'Jodeci emhlophe, 'ebhekisa kwi-90s ye-R & B quartet eyaziwa ngokuba yingoma yabo ethi' Yiza Uthethe Nam. ' Kodwa xa uKahn, owayene-resumé yakhe ene-R & B kunye ne-hip-hop, wadibana ne-BSB kwaye wabona imidaniso yabo egudileyo, wayecinga ukuba bafana kakhulu 'noMichael Jacksons omncinci.' Ngevidiyo kaMJ edumileyo ethi 'Thriller' engqondweni, eyayineemvumi ezazikhokela umdaniso owenziwe ngomculo kunye neZombi, wavelisa umbono ofanayo kwi-Backstreet Boys.
Kwividiyo, ukhenketho lwebhanti lomfana luyaphuka kufutshane nendlu yesiporho, apho banyanzelwa ukuba bachithe ubusuku obothusayo. I-haunted manor inefuthe kumakhwenkwe, iguqula uBrian Littrell abe yingcuka; UAJ McLean kwiErik, Iphantom yeOpera ukuhamba; UKevin Richardson ungene kubuso obubini uGqirha Jekyll & Hyde; Howie D kwiDracula; kunye noNick Carter kumama. Bayahlangana kwigumbi lokudlala ibhola baze baphume 'Iitriller'-esque ezihamba neqela labadanisi. Ekugqibeleni, bakhululekile ekufumaneni ukuba amava onke yayiyiphupha nje elibi-de umqhubi wabo ajike abe sisilo.
Iirekhodi zeJive zenqabile ukuxhasa ngemali ividiyo yezigidi zeedola ngesizathu sokuba iMTV ayizukuya kulo mxholo. Ibhendi yabeka imali yabo kwaye, yakuba ikliphu yemizuzu emithandathu iqhume, balwa nelebheli ukuze bababuyisele.
KuKahn, kwakubalulekile ukuba ividiyo ihluke ngokobuhlanga, eyayingumceli mngeni eLos Angeles, apho umculo 'wahlulwa ngendlela emangalisayo' kwiminyaka emihlanu emva koqhushululu lomdyarho wesixeko. Ndaya, 'Kufuneka sikwenze oku ngokobuhlanga: UKevin uza kudanisa nentombazana emnyama kwaye kuyakubakho intombazana yaseAsia kunye nentombazana yaseSpain. Ndidinga ukuxuba oku kwaye ndiqiniseke ukuba leli lizwe endifuna ukulibona kwiscreen, utshilo Ibhilibhodi . Into emnandi kukuba andicingi ukuba ndakhe ndayixoxa naBackstreet Boys. Kwakungathi abakhange bayicinge nokuyicinga. UKevin wadanisa nentombazana emnyama kwaye kwakungekho mntu ucwayizayo. ' Ngelo xesha, kwakunzima ukulandelela abadanisi abahlukeneyo ababenolwazi ngokuhamba kwe-hip-hop, kodwa ekugqibeleni uKahn waqesha ama-Fly Girls avela Umbala ophilayo .
Umqhubi webhasi kwividiyo wayedlalwe nguAntonio Fargas, owaziwa ngendima yakhe njengoHuggy Bear onolwazi kumdlalo wee-70s Inkanyezi & Hutch . I-Backstreet Boys yayingabalandeli abakhulu kolu ngcelele kwaye babonwabile ukuba no-Fargas ebhodini. Ngo-2017, kwiminyaka engama-20 emva kokuvela kwividiyo, watsho uFargas Ibhilibhodi Wayesaziwa njengomqhubi webhasi.
Ngo-2001, icwecwe lathengisa iikopi ezizigidi ezili-14 e-US kuphela, bafumana isatifikethi se-14x sePlatinam esivela kwiRekhodi yoShishino lweMelika (RIAA).
Oku kuphumelele ngeVidiyo yeQela eliBalaseleyo kwiiMbasa zoMculo zeMVV ka-1998.
UCarl Sturken, umbhali weengoma owabhala ngokubhaliweyo esithi 'N Sync's' UThixo Umele Ukuba Uchithe Ixesha Elincinane Kuwe, 'wafunda isifundo esibalulekileyo malunga nokujikeleza komculo xa i-Backstreet Boys idlula e-US. USturken uxelele iiNgoma eziVakalayo ukuba uve enye ye-BSB 'Yekani Ukudlala Imidlalo (Ngentliziyo Yam)' eNgilane kwaye, ngelixa wayethanda le ngoma, wayengacingi ukuba eli qela liza kuhamba eMelika, apho amaqela amakhwenkwe ayedlulileyo . Wacinga kwa into enye xa 'uBackstreet's Back' ewile.
Amakhwenkwe angemva aphume 'eyeka ukudlala imidlalo' emva koko aphuma nge 'Backstreet's Back,' eyayikwangolo hlobo lunye. Kuvakala ngathi nguTeddy Riley wakudala. Ndahleka kuba ndathi, 'Ngoku uza kuphuma nalaa ngqondo ndandikuxelele yona kwiminyaka emithathu edlulileyo iphelelwe lixesha.' Kodwa kufana newotshi eyaphukileyo echanekileyo iiyure ezili-12. Abantwana abancinci ababekwi-Backstreet Boys khange bakhumbule abantwana abatsha kwi-block, ukhumbule.
Kwaye abantwana abatsha kwiBhloko bebesenza nje ukuphindaphinda uHlelo oluTsha, kuba yayinguMagazini eNtsha emhlophe kwaye ilawulwa ngabantu abafanayo. Ke ngoku beza nezi zinto ziziqhwala ziphinda zifundwe ngoku zivakala zintsha ebantwini. Esi sesinye isifundo esihle kakhulu ekufuneka sisifundile. '
Ingelosi inombolo 717 intsingiselo
Ingelosi yenombolo 9 enentsingiselo
hey intombazana encinci likhaya lakho lotata
leadbelly ubulele phi phezolo lyrics
Kufuneka kubekho indlela yokuphuma apha watsho umqhula kwisela
andinakuphila ukuba ubomi ngaphandle kwakho lyrics
Kutheni singaze sifumane mpendulo